Creative Writing » ဇာတ်ကောင်များ၏ ဇာတ်ကောင်များ	11
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 20, 2015 in Creative Writing, Short Story | 11 comments
အောင် မိုးသူ says: ဖတ်သွားတယ် ဖတ်သွားတယ် စဉ်းစားတယ် စဉ်းစားတယ် တွေးတယ် တွေးတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: .တွေးမိတာကို ချရေးကွယ်… ရေးလာရင်… ထပ် ဖတ်မယ်..
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ အေဘီစီဒီ ကို လုပ်ကြံမဲ့ ဇာတ်ကောင် အီး လေး ကို ဖန်တီးပေးဘာချင့်!!!
Alinsett @ Maung Thura says: ဇာတ်လမ်း ရေးသူဆီ စာပို့ရမယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . ဟိုအရင်ခေတ်က ၀တ္ထုဆိုရင် ရေးချင်သလောက်ရေး၊ ရှည်ချင်သလောက်ရှည်၊ စာရေးဆရာ စိတ်လွှတ်ချင်တိုင်းလွှတ် အဲလို။ အခု ဒီခေတ်မှာ အဲလိုမျိုး မရတော့ဘူး။ တန်းမ၀င်တော့ဘူး။ ၀တ္ထုရေးနည်းကို ရှိတယ်။ ပြည်ပမှာ အဲဒါ ကိုသင်ကြားရတယ်။ အကုန်ကွက်တိ၊ အပိုအလို မရှိစေရ။ အဲဒီ ၀တ္ထု ရေးနည်း စာအုပ် အမမှာ ရှိတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: အစ်မတော်ပြုံး
kai says: ဆရာမောင်သာရကတော့.. ရသရေးမှစာရေးဆရာတဲ့..။
kai says: သိသလောက်ပြောရရင်.. ဟောလိဝုဒ်ရဲ့.. အရောင်းရဆုံးရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးရာမှာ.. အဲလို.. မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ ဗီလိန်..။ အဖြည့်၁။ ၂။၃။၄ ကွက်တိလုပ်ကြတာ…။
ဟေသီ says: ဝတ္ထုလို့ မမြင်မိလိုက်ဘူး။ မျက်လုံးထဲမယ် သူတို့ပဲ ပြေးပြေးမြင်လာတယ်…..
Alinsett @ Maung Thura says: ဒါဆိုရင် ဒါ ဝစ်ထု ဖြစ်ပြီ
Mike says: .မင်းရေးသမျှထဲမတော့ ဒီတစ်ပုဒ်အကြိုက်ဆုံးပဲကွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.